Faarax Macalin Oo weerar afka ahi Kuqaadey ciidamada Dowlada itoobiya. – idalenews.com
Faarax Macalin Oo weerar afka ahi Kuqaadey ciidamada Dowlada itoobiya.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamanka Kenya Faarax Macalin Dawaare ayaa ka soo horjeestay in ciidamada dalka itoobiya ay ka mid noqdaan howlgalka AMISOM ee dalka Soomaaliya, isagoo sheegay in kamid noqoshada itoobiya ee AMISOM aysan waxba soo kodhineynin inay aalshabaab xoojiso maayaane sida uu yiri.
Wareysi uu siiyay idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga ayuu ku sheegay in ciidamada Itoobiya ee dhawaan ku biiray AMISOM aysan wax wanaag ah soo kordhin doonin dalka soomaaliya kaliya waxay keenayaan ayuu yiri inay Al-shabaab taageero ku hesho faragelinta itoobiya oo ay dad badani ku biiraan.
“Ku biirista ciidanka Itoobiya ee AMISOM waxba sooma kordhin doono oo aan ka aheyn in shacabka Soomaaliyeed ay taageero xoogan siin doonaan Al Shabaab,sababtoo ah Itoobiya waa cadawga Soomaaliyeed soomaaliduna waxay u arkaan in Itoobiyaanku halis ku yihiin jiritaankooda dadeed iyo dhuleed”ayuu yiri Faarax Macalin.
Wuxuu sheegay kuwii go’aamiyay in ciidamada Ethiopia ay ka mid noqdaan howgalka Midowga Afrika ee AMISOM, ay dano gaar ah ka lee yihiin arrimaha Soomaaliya, Wuxuuna Sheegay Inay rabaan in dib la soo celiyo Al-Shabaab, wuxuuna intaasia ku siidaray in Ethiopia aan lala mid dhigin ciidamada kale ee ku jirra howgalka AMISOM,waayo dagaal soo jireen ah ayaa ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu yiri.
“Ciidamada Ethiopia cid kasta ayaa la dagaallamaya, xittaa, kan aaminsan mab da’ kale, siyaasiga, iyo qof kasta ayaa u arka ciidamada Ethiopia kuwa ku soo duulay Soomaaliya” ayuu yiri Siyaasiga Faarax Macallin oo dhinaca kale sheegay Ciidamada Ethiopia in ay sabab u ahaayeen markii ay soo galeen Soomaaliya daba yaaqadii sannadkii 2006-da in ay sameesmaan Al-shabaab.
Mar la weydiiyay Faarax Macallin wax yaabaha ay ku kala duwan yihiin ciidamada Ethiopia iyo kuwa Kenya waxa uu yiri anigu waxaan baarlamaanka Kenya ka horsheegay in waqti loo yeelo gelitaanka iyo bixitaanka ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya, isla markaasna ay howgal deg deg ku dhamaada oo xooggan ka fuliyaan deegaanada ay tagayaan.
Maamulka Jubba oo sheegay inaysan wareejineynin Dekadda iyo Garoonka Kismaayo Maxay tahay sababtu
Muddo kordhin 2 bilood ah oo loo sameeyey Gudoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise